hataru/हटारु: नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ,: डा. भट्टराई
नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ,: डा. भट्टराई
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला दुई उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापासँग गठबन्धन गरेपछि फेरि चर्चामा आए । नयाँ गठबन्धनसँगै संसदीय विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय पार्टीले लिएको छ । जेठ १४ गते तीन दलबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने सहमति भइसकेको अवस्थामा के भट्टराई राष्ट्रिय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यीलगायत पार्टी विवादका विषयमा कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानीः
शान्ति र संविधानको कुरा छाडेर तपाईं पद बाँडफाँडमा किन लाग्नुभयो ?
शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले भन्ने मान्छे म नै हुँ । पालुङटार बैठकमै मैले यो कुरा पेस गरेको थिएँ । त्यसबेला पार्टीमा पर्याप्त सहमति नबनेकाले निर्णय हुनसकेन ।
वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिमा बहुमतले शान्ति र संविधानको कार्यनीति निर्णय भयो । कमरेड अध्यक्षसमेत त्यो विचारमा आउनुभयो । त्यसपछि शान्ति र संविधानको लाइन पार्टीमा आधिकारिक बन्यो । त्यो कुरा टुंगियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिप्रधान हुँदैन, सामूहिकतामा चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पालुङटार बैठककै बेला उठाएका थियौं । पछिल्लो चरणमा शान्ति र संविधानको लाइन स्पष्ट भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । संगठन र नेतृत्वको प्रणाली पनि सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने बहस चल्यो र यसमा किरणजीले पनि साथ दिनुभयो । हामीले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर संघर्ष गर्‍यौं । यसको अर्थ हामीले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेको होइन । यो लाइन त पारित भइसकेको छ । यसबाट पछि हट्ने कुरै हुँदैन । हामीले व्यक्तिप्रधान नेतृत्वको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेको हो । यसरी वैचारिक राजनीतिक लाइन पनि शान्ति र संविधानमा जानुपर्छ र सांगठनिक लाइन पनि व्यक्तिप्रधान पद्धतिको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आधिकारिक रूपमा पारित भएको
छ । सेट अब बल्ल मिलेको छ । अब शान्ति र संविधानको कार्यनीति अघि बढ्छ ।
माओवादीभित्रको विवादले शान्ति र संविधानलाई पछि धकेल्यो नि ? यसमा तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्न ?
बाबुराम भट्टराईले भनेअनुसार हुने हो भने गत मंसिरमै शान्ति र संविधान प्रक्रियाले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । पालुङटारमा शान्ति र संविधानको कार्यनीति पारित गरौं भनेको हो । त्यसबेला यसमा बहुमत हुनसकेन । शान्ति र संविधान अघि बढ्न नसकेको माओवादीका कारणले होइन । जेठ १४ पछि सेना समायोजनमा सहमति गरी आधारभूत रूपमा संविधानमा सहमति गरौं र राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेसँग राख्यौं । मुख्यगरी कांग्रेसले सहमति नजनाएकाले अघि बढ्न सकेन । हाम्रो भित्री बहसले होइन । शान्ति र संविधानमा अघि जान हाम्रो बहसले रोकेको होइन । मेरो कारणले गर्दा ढिलो भएको भन्ने झन् प्रश्नै होइन ।
प्रधानमन्त्री हुने मोहले तपाईंले कार्यविभाजनको कुरा चर्को उठाउनुभयो भनिन्छ नि ?
म शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । मैले धेरै पहिलेदेखि आधिकारिक लाइन नभएको बेला पनि बोल्दै आएको हुँ । अब पार्टीको लाइन त्यही बनिसकेको अवस्थामा म खुसी भएर दृढतापूर्वक लागिरहेको छु । कसैले आशंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म शान्ति र संविधानको एजेन्डा कार्यान्वयन हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ र शान्ति र संविधान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
पार्टीले तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ, कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ?
हामीले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजन, संविधान लेखन र राष्ट्रिय सरकारबारे प्याकेजमै निर्णय गरेका छौं । हामीले सेना समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, तह निर्धारण, संख्या र पुनःस्थापनको प्याकेजमा सहमति कायम गरेर सहमति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पुनः वर्गीकरण सुरु गरिहाल्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । साथै संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि बनाउने र जनसेनाको पुनः वर्गीकरणको साथसाथै राष्ट्रिय सरकार प्रक्रिया अघि सार्ने निर्णय भइसकेको छ । म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छु ।
यो एक महिनामा शान्ति र संविधान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?
प्रतिगामी शक्तिहरू संविधानसभा भंग गराएर पछाडि फर्काउने प्रयत्नमा पहिलेदेखि नै छन् । शान्ति र संविधानबारे गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सेना समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएर संविधान निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार बनाउन जानैपर्छ । केही हप्ताभित्र काम अघि बढाउँछौं ।
एकातिर राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर यही सरकारमा मन्त्री थप्दै हुनुहुन्छ । यो कहाँ मेल खान्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय सरकार हो । त्यसका लागि हामीले जेठ १४ लगत्तै प्रयत्न पनि गर्‍यौं । खासगरी कांग्रेसबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएन । अर्को पाटो के हो भने हाम्रो पार्टीले यो सरकारमा पठाएको टोलीमा महिला समावेशी
भएन । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँदा र बैठकको कारणले अलि ढिला भयो । यसमा केही भ्रम परेजस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यो सही होइन । अरू पार्टी सहमत हुन्छन् भने त्यसमै समावेशी प्रतिनिधित्व बनाएर पठाउन तयार छौं । तर राष्ट्रिय सरकार गठन हाम्रो हातमा मात्र छैन । त्यो नभएको स्थितिमा जतिबेलासम्म राष्ट्रिय सरकार गठन हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नयाँ मन्त्रीको टिम पठाउन खोजेको हो । केही हप्ताको निम्ति पठाउन खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने तीन दलबीच सहमति भएको बेला मन्त्री फेर्नुको अर्थ के हो ?
नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने भनेका छौं । उहाँ आफैंले पनि पहल गर्नुभएको छैन । तैपनि हाम्रोतर्फबाट आग्रह के हो भने पाँचबुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना
गरेर जानुपर्छ ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाले हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष दाहाललाई घेराबन्दी किन गर्नुभयो ?
हामीले घेराबन्दी गरेको पनि होइन, हटाउन खोजेको पनि होइन । पार्टी नेतृत्व सामूहिक प्रणालीमा जानुपर्‍यो भनेर मत संकलन गरी बुझाइदिएका हौं । निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर हस्ताक्षर गरिएको हो । त्यसको औचित्यबारे मैले बैठकमा राखिसकेको छु ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाको गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ ?
यो गठबन्धन होइन । हाम्रो कुनै मुद्दामा कहिले कसैसँग मिल्छ, कहिले कसैसँग मिल्छ । राजनीतिक कार्यदिशामा अध्यक्ष र मेराबीच मिल्छ । सांगठनिक कार्यशैली र नेतृत्व सम्बन्धमा किरणजीसँग निकटता छ । दुवैलाई बुझिएन भने भ्रम सिर्जना हुन्छ । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यनीति पारित भएको हुनाले यसमा विवाद छैन । यसमा म बढी जिम्मेवार छु । सांगठनिक विषयमा मात्र किरणजीसँग सहकार्य भएको हो । सहकार्य स्थायी भन्ने हुँदैन । मुद्दाअनुसार कहिले बादल, कहिले प्रकाशसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।
Posted by Nabin Bibhas at 3:10 AM
Prachand halts funds for his artists
रोल्पाका माओवादी भन्छन् -- भुलियो एजेन्डा
Maoists for bold move if ministers not inducted Sa...
‘अफकोर्स, राजेश हमाल’
Facebook explains how to turn off 'facial recognit...
After they broke bread in Gongabu
वर्ष अठार, पत्‍नी पाँच
नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ,:...
With Maoists patching up, will peace win?
बुढेसकालको बिहे माया र यौनको परिपक्व संगम
Narayankaji to lead Maoist team in cabinet
Dahal for power sharing to end party infighting
Baidya-Bhattarai in new drive to downsize Dahal
Maoist factions settling power-sharing in govt
Maoist leaders close to striking deal
Dahal offers to resign as PP leader after Aug 28
Baidya, Bhattarai chart out joint strategy
Badal: The game changer!
Showdown looms among Maoist factions
Differences persist, standing committee meet Sunda...